Fampakaram-baravaran-tany fanakorontanana JJCD / JJCD10
TOSIKARATRA avo 10kV kofehy roa mifandray amin'ny fantsom-pifandraisana mifono vy miaraka amina peratra fitehirizana ho an'ny fiarovana an-tany
10kv roa kofehy mifono fihantonana mifono vy miaraka amin'ny Earthing Ring ho an'ny fiarovana ny tany sy ny fanaraha-maso elektrika mandritra ny fotoana fohy. Rehefa manenjana ny kofehy, ny nifin'ny takelaka ifandraisana dia miditra ao anaty insulate ary mametraka fifandraisana tonga lafatra. Hamafisina ny kofehy mandra-pivoaky ny lohany. Hamafisin'ny tavy fanamafisana (voanjo). Sorohina ny fanesorana insulate.
Toetran'ny serivisy: 400 / 600V, 50 / 60Hz, -10 ° C ka 55 ° C
Fenitra: IEC 61284, EN 50483, IRAM2435, NFC33 020.
Mety amin'ny conducteur Aluminium sy varahina
1KV 10KV fihantonana fanindronana insulation
Ny insulation Piercing Connector IPC mpampitohy dia mety amin'ny alimina sy conducteur alimina sy singa
tsy very, end cap izay mifatotra amin'ny vatana, fitaovana insulation vita amin'ny fibre fitaratra mahatohitra toetr'andro manamafy
polymer, contact nify vita amin'ny varahina vita amin'ny varahina na varahina na aliminioma, bolt vita amin'ny vy dacromet. Rahoviana
manamafy ny bolt, ny nifin'ireo takelaka ifandraisana dia miditra ao anaty insulate ary mametraka lafatra
fifandraisana. Hamafisina ny kofehy mandra-pivoaky ny lohany. Sorohina ny fanesorana insulate.
TTD mpampifandray voapoizina voaroaka (fanoherana afo)
Ny mpampitohy dia nampiasaina tamin'ny fifandraisana an-tserasera mivantana na maty, ary ny tsipika lehibe & fantsona dia ho an'ny conducteur Aluminium na Copper. Ny mpampifandray dia mijanona amin'ny flashover 6kV ao ambanin'ny rano. Ny vatany miaro dia tena toetr'andro sy mahatohitra mekanika.
Mora ny nametraka ary azo antoka ampiasaina. Ny fanamafisana miaraka dia manindrona ny lehibe sy ny paompy, ny visy manamafy dia vita amin'ny vy Dacromet. Fiarovana amin'ny rano amin'ny tariby miovaova amin'ny alàlan'ny fametahana ny satroka farany. Ny sampana dia mety ho eo ankavia na amin'ny ankavanana.
Mametraka mpampifandray tokana mora foana miaraka amin'ny tiro fanamafisana avo lenta.
1kV mpampitohy manindrona efatra-core (peratra fifandraisana tariby)
Ny mpampitohy manindrona efa-joro dia mety indrindra amin'ny fametahana ireo tsipika lehibe ankehitriny. Tsy ilaina ny manaisotra ny insulation tariby lehibe. Ny mpampitohy iray dia afaka manangana tsipika sampana efatra amin'ny fotoana iray miaraka, ary saika tsy misy habaka izany. Izy io dia mampiasa alim-bato alefa toy ny akorandriaka. Ny tanjaka farany avo indrindra, azo ampiasaina indray ary ny fahombiazany amin'ny ankapobeny dia ambony noho ny fametahana rantsan-kazo manindrona tariby.